Dawladaha Itoobiya Iyo Mareykanka Oo Isku Khilaafsan Heshiiska Biyo Xidheenka Ee U Dhexeeya Itoobiya Iyo Masar | Himilo Media Group
Dawladaha Itoobiya Iyo Mareykanka Oo Isku Khilaafsan Heshiiska Biyo Xidheenka Ee U Dhexeeya Itoobiya Iyo Masar
Washington (Himilo)-Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in halka ay Dowladda Mareykanka ka taagan tahay biyo xidheenka muranka dhaliyay ee Nile uu yahay “mid aan la aqbali karin.”
Laanta af Soomaaliga ee Idaacada BBC-da ayaa warkaasi wax ka qortay waxaanu u dhignaa sidan; Washington ayaa wadahadal ka dhex waday dalalka Masar iyo Itoobiya oo in muddo ah ku muransanaa mashruuca biyo xidheenka oo laga cabsi qabay in uu dagaal u horseedo labada dal.
Arrintan ayaa timid kadib markii Mareykanka uu sheegay in dhismaha biyo-xidheenka aanan la dhameystiri karin ilaa iyo inta heshiis rasmi ah laga gaadhayo.
Haddii Itoobiya ay dhameystirto biyo xidheenkaas waxa uu noqonayaa biyo xidheenka ugu weyn qaaradda Afrika ee koronto laga dhaliyo, waxaana Itoobiya iyo dalalka kale ee deriska la ah ay ka heli doonaan koronto awood leh.
Xukuumadda Addis Ababa ayaa dooneyso inay buuxiso biyo xidheenka marka la gaadho bisha June ee sanadkan, balse dalka Masar oo ku tiirsan biyaha wabiga ayaa wallaac ka muujisay dhismaha biyo xidheenkaas, iyadoo sheegtay inay saameyn doonto biyaha ay ka hesho halkaasi.
Dowladda Masar oo boqolkiiba 90 ku tiirsan biyaha wabiga Nile ayaa heshiis ay dhinacyada Masar iyo Sudan wada gaadheen sanadkii 1932 waxa uu dhigayaa in dhammaan xuquuqda biyaha la siiyo dalalkaas, waxaana Masar ay mashruucaas u aragtay mid khatar ku ah dalkeeda tan iyo markii la bilaabay sanadkii 2011-ka.
Masar ayaa ka baqeysa in wabiga uu gacanta u galo Dowladda Itoobiya, waxaana ay dooneysaa in biyo buuxinta biyo xidheenka ay muddo qaadato, si aanay isu dhimin biyaha wabiga.
Arrintan ayaa xiisad ka dhex abuurtay labada dal, waxaana mid walba uu ku goodiyay in uu qaadi doona tallaabo walba oo laga mamaarmaan ah, si ay u ilaashadaan dannahooda.
Dawladda Mareykanka ayaa soo kala dhexgashay labada dhinac sanadkii 2019-ka, si ay u dhexdhexaadiso, waxaana toddobadkii lasoo dhaafay ay sheegtay in la gaadhay heshiis, waxaana xukuumadda Washington ay Itoobiya ku boorisay inay dhaqangeliso heshiiska.
Heshiiskaas ayaa waxa uu dhigaya in aanan la buuxinin biyo xidheenka iyadoo aan la saxeexin heshiiska rasmiga ah.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya, Gedu Andargachew ayaa sheegay in warka kasoo yeedhay Dawladda Mareykanka uu yahay mid aan diblomaasiyadda waafaqsaneyn, waxaana uu yidhi: “Waxaan dooneynaa in Mareykanka uu yeesho door wax haggaajin ah, wax kalena aanan la abqali karin”.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dhiggiisa Masar u sheegay in dowladiisa ay dedaal walba u geli doonto sidii heshiis looga gaadhi lahaa muranka biyaha ku salleysan ee u dhexeeya labada dal.